Kunuka santungwana ngesinqumo seSafa | Isolezwe
Kunuka santungwana ngesinqumo seSafa
ezemidlalo / 13 September 2017, 09:57am / Mthokozisi Mncuseni
UMENGAMELI weSafa uDanny Jordaan usekuqinisekisile ukuthi ngeke baphikisane nesinqumo seFifa sokuthi umdlalo weBafana Bafana neSenegal uphindwe
KUNGENZEKA yini ukuthi iSouth African Football Association (Safa) iphoqiwe ukuthi ingalokothi idlulisele phambili udaba lokuphindwa komdlalo wokuhlungela iNdebe yoMhlaba ezokuba seRussia ngonyaka ozayo?
IFifa imemezele ukuthi ukulahlwa yicala kukaJoseph Lamptey waseGhana okunguyena obephethe umdlalo onqotshwe yiBafana Bafana ngo 2-1 ngoNovemba nyakenye yikhona okuyifikise ekutheni lo mdlalo awuphindwe. Kuthiwa usuku lusazomenyezelwa kodwa uzoba ngoNovemba.
Izinsolo zokuphoqwa kweSafa ukuthi ithule ngoba inamatwayitwayi ayo (njengemali okuthiwa yaphuma ngomgunyathi ngemuva kweNdebe yoMhlaba ka-2010 nemiphumela yeminye yemidlalo yobungani iBafana eyidlale ngaphambi kuka-2010) ziqale ngemuva kwenkulumo engaphelele kaNorman Arendse ayisho ngempelasonto.
“Esikuthole ngezokuxhumana zeFifa ukuthi njengoba sesithathiwe isinqumo ngeke ube khona upotsho wokulidlulisela phambili icala. Ngeke ngande kakhulu ngalokhu kodwa kunjalo, indlela iFifa eyenze ngayo isithusile uma uzokhumbula ukuthi sekuyophela unyaka lo mdlalo okukhulunywa ngawo ugijinyiwe,” kusho u-Arendse.
Ngemuva kokuqala ngokuthi ngeke uphindwe lo mdlalo, umengameli weSafa, uDanny Jordaan unqunywe umlomo yiFifa isimemezela ukuthi uzophindwa.
Kulapho ebuye khona esethembisa izwe ukuthi lesi sinqumo bazosiphikisa ngoba iFifa ikucacisile ukuthi abanacala kulezi zinsolo ezibhekene noLamptey.
Ngemuva komhlangano obekukhona kuwona * -Irvin Khoza noKaizer Motaung ngoMsombuluko, iSafa isivuse ngesitatimende izolo ekuseni lapho ibisicula khona ingoma ehlukile.
“Ngemuva kweminye imininingwane iSafa esiyitholile kwiFifa ngalolu daba, nokuzimisela ngokuziqhelisa emikhonyovini ebholeni, sinqume ukuthi sisamukele isinqumo seFifa sokuthi umdlalo uphindwe,” usho kanje uJordaan esithangamini nabezindaba izolo ekuseni.
Yize kunjalo isitatimende esikhishwe iSafa khona izolo emini, siyakucacisa ukuthi lisekhona ithemba ngokuthi lo mdlalo ngeke uphindwe ngoba sebezwile ukuthi uLamptey uselufake enkantolo enkulu yaseSwitzerland udaba lokuxoshwa kwakhe unomphelo ebholeni. Uma icala limvuna uLamptey, konke obekubukeka njengokonakele ngemidlalo ethinta yena kuzobuyela esimeni esejwayelekile. Besibhale kanje isitatimende seSafa. Nokho azicaci kahle izizathu ezenza ukuthi iSafa ivumelane nokuphindwa komdlalo weBafana neSenegal uma kungukuthi yona ayithinteki nakancane kulokhu.